Ny Zon’Olombelona no Sorona Amin’ny Fahombiazana Ara-Toekarenan’i Singapaoro,’ Hoy Ilay Mpikatroka Han Hui Hui · Global Voices teny Malagasy
Ny Zon'Olombelona no Sorona Amin'ny Fahombiazana Ara-Toekarenan'i Singapaoro,’ Hoy Ilay Mpikatroka Han Hui Hui
Voadika ny 07 Avrily 2018 5:52 GMT
Pikantsarin'i Han Hui Hui avy ao amin'ny kaontiny YouTube.
Lahatsoratr'i Kathy Triệu avy amin'i Loa, tranonkalam-baovao sady tetikasa radio an-tseraseran'i Việt Tân izay mampiely tantara momba an'i Việt Nam izy ity. Navoakan'ny Global Voices eto indray ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mpikatroka ao Singapaoro 26 taona i Han Hui Hui. Na dia tanora aza izy dia niteraka ny fahatezeran'ny manampahefana singapaoreana nandritra izay efa-taona farany izay noho ny ezaka nataony hampahafantatra ny tontolo ara-politika manempotra ao Singapaoro sy ny famerana ny fitenenana sy ny fivoriana.
Tamin'ny taona 2017, efa anaty fikasana hanatrika fivoriambe momba ny zon'olombelona ao Malayzia i Hui Hui, saingy vantany vao tonga izy dia nampodiana noho ny fangatahan'ny manampahefana singapaoreana.
Mbola manohy mifahatra manoloana ny fikasan'ny governemanta hanaisotra ny fahafahany miteny ihany izy, tamin'ny alalan'ny fitenenana amin'ny fivoriana iraisampirenena tahaka ny Fetiben'ny Fahafahana an'Aterineto tontosaina ao Espaina, izay sambany vao natrehiny tamin'ny marsa 2018.
Kathy Triệu (KT): Kathy Triệu mitatitra avy amin'ny Fetiben'ny Fahafahana an'Aterineto eto Valencia, Espaina ity. Eto aho miaraka amin'i Han Hui Hui avy ao Singapaoro, izay mpikatroka ary mitarika fivoriana iray amin'ny androvoalohany ivorianay eto. Inona no tianao holazaina amin'ny olona momba an'i Singapaoro?
Han Hui Hui (HHH): Mihevitra aho fa ny zavatra tokana ananan'i Singapaoro dia ity lazaina ho “fahombiazana ara-toekarena” ity, ary tsy manana zon'olombelona velively izahay. Io fahombiazana ara-toekarena io anefa dia ny Singapaoreana no atao sorona amin'izany, indrindra fa eo amin'ny fampiatranoam-bahoaka, ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka, ary ny resaka asa. manana fahombiazana ara-toekarena izay mahatalanjona ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao i Singapaoro. Saingy ny zon'olombelona ao Singapaoro no sorona amin'izany. Ny fampialofam-bahoaka no zavatra voalohany. Singapaoro no firenena tokana eto amin'ity izao tontolo izao ity tsy mandany vola na dia ariary aza amin'ny vola ananany hanaovana fampialofam-bahaoka. Ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka no faharoa. Manana lalàna tsy maintsy hanaovan'ny olon-drehetra fiantohana anefa izahay, manery ny olona ny governemanta hividy, mampakatra any amin'ny faratampony ny fiantohana tsy miankina. Amin'io paika momba ny fiantohana io, mbola ambony noho ny vola tsy maintsy aloan'ny governemanta isan-taona ny fitambaran'ny vola voangon'ny governemanta. Ny retirety fisotroan-dronona no fahatelo. Amin'io paika io dia teren'ny governemanta ny vahoaka hametraka ny 30 ka hatramin'ny 40 isanjaton'ny karamany [ho amin'izany].
KT: Raha nanatrika ny fivoriana notarihanao aho, dia nahaliana ahy tanteraka ny fomba namoronan'ny governemanta lalàna ho setrin'ny fihetsiketsehana ataonao. Azonao lazaina ahy ve ny sasantsasany amin'ireny lalàna ireny?
HHH: Ao Singapaoro, ao amin'ny zaridaina iray ihany ianao no afaka manao hetsi-panoherana. Toe-javatra mampalahelo tokoa izany ao Singapaoro. Sario fotsiny anie izao, milaza ny governemanta fa afa-manao fihetsiketsehana ianao, saingy ao amin'ny zaridaina iray ihany no azo anaovana izany. Mitovy amin'ny fiangaviana anao tsy hanao fihetsiketsehana ihany izany. Te-hanao fihetsiketsehana eo ivelany manoloana ny sampan-draharahan'ny governemanta ianao. Te-ho afa-maneho ny fahalalahanao mivory na aiza na aiza ao Singapaoro ianao, saingy ao amin'io zaridaina io ihany no azonao anaovana izany.
Tamin'ny 27 Septambra 2014, noho ny ezaka nataonay hatramin'ny taona 2013 ka hatramin'ny taona 2014, vitanay ny nahazo singapaoreana mihoatra ny 6000 hanao fihetsiketseham-panoherana tao amin'io zaridaina io. Nandefa minisitra iray ho ao ny governemanta tamin'io andro io, ary niezaka ny hametraka karazam-pandrika rehetra hamelezana anay. Nihantsy ny mpanao fihetsiketsehana ry zareo hanao zavatra be dia be. Mankasitraka ny firaisamonina iraisampirenena izahay niteny nanohitra izany toe-javatra izany sy nanohana anay. Saingy tsy nisy olona nivory tao amin'io zaridaina io intsony taorian'io toe-javatra nitranga tamin'ny 27 Septambra 2014 io, nanjavona ny fahitana fihetsiketseham-panoherana tao Singapaoro. Tsy nisy olona nivory tao amin'io zaridaina io intsony, aleolazaina hoe tsy nisy intsony ny hetsi-panoherana. Izany no fihetsiketseham-panoherana lehibe indrindra tao anatin'ny taonjato faha-21 tao Singapaoro. Hatramin'io hetsi-panoherana io, nanao famotopotorana olona 20 teo ho eo ny governemanta, ary nanameloka ny enina taminay. Iray tamin'izany aho. nanintsana ahy tsy ho afa-mijoro tamin'ny fifidianana parlemantera ry zareo noho io fihetsiketseham-panoherana io. Midika izany fa amin'ny fifidianana ho avy dia tsy ho afa-mijoro aho.
KT: Ahoana no nahavitan-dry zareo nandrara anao tsy ho afa-mandray anjara tamin'izany fifidianana izany?
HHH: Ao Singapaoro, misy lalàna milaza fa raha voasazy mihoatra ny 2000 dôlara ianao [1520 dôlara amerikana], dia tsy ho afa-mijoro amin'ny fifidianana. Ao Singapaoro mialoha ny ahafahanao manao fihetsiketsehana, dia tsy maintsy miteny amin'ny governemanta ianao fa hanao fihetsiketseham-panoherana. Ao amin'ny tranonkalan-dry zareo hanaovana fihetsiketsehana, safidy telo ihany no omeny anao. Na ianao hanao kabary, na ianao hitarika hetsi-panoherana, na ianao mihira izay manao fampisehoana no dikan'izany. manindry amin'ireo safidy ireo ihany no azonao atao. Matetika aho no manendry ny kabary; manindry ny kabary avokoa izahay rehetra. Saingy raha vao manindry ny kabary ianao dia hoampangaina ho manao fihetsiketseham-panoherana. Fa raha manindry ny fihetsiketseham-panoehrana ianao ka manao kabary, dia hosaziana noho ny fanaovana kabary ianao. Noho io fandrika ao amin'ny tranonkalan'ny governemanta io, dia afa-nampandoa onitra ahy 3100 dôlara [2360 dolara amerikana] noho ny fanaovana kabary sy fihetsiketseham-panoherana indray miaraka ny governemanta. Mihoatra ny fetran'ny 2000 [dôlara] izany. Noho izany toe-javatra izany, tsy ho afa-mijoro amin'ny fifidianana aho. Izany no voalohany nampandoavan'ny governemanta olona iray noho ny nanaovany fihetsiketseham-panoehrana tao amin'ny zaridaina; tsy mbola nitranga mihitsy izany teo aloha.
Tsy dia fantatro loatra hoe nahoana ry zareo no manao ahy ho lasibatra. Tamin'ny herintaona, tamin'ny volana jona, nankany Malayzia aho hanatrika lanonana momba ny zon'olombelona. Nitsahatra tsy namoaka lahatsoratra antserasera nandritra ny telo volana aho. tsy namaly na iza na iza tamin'ny telefonina na imailaka aho satria fantatro fa narahi-maso ireo. Hafahafa tamin'izany satria sambany teo amin'ny tantaran'i Singapaoro niteny tamin'ny governemanta Malayziana ry zareo hampody ahy ho ao Singapaoro hanakana ahy tsy hanatrika ny lanonana. Nilaza ry zareo fa, “mampatahotra eo amin'ny firenena aho, raha tafiditra ao aho dia hampisy fahasimbana eo amin'ny fifandraisan'ny roa tonta.” Tamin'izany ny sampan-draharaha Malayziana misahana ny fidirana ao amin'ny firenena no nampody ahy ho any Singapaoro.
KT: Ahoana ny namalian'ny governemanta ny fomba vaovao tamin'ny fanehoanao ny eritreritrao?
HHH: Mieritreritra aho fa namaly tamin'ny famoronana lalàna vaovao ny governemanta. Ny antony nahatonga ahy hanomboka ny fihetsiketseham-panoherana aza dia noho ny nandefasan-dry zareo taratasy tamiko fa mitory ahy ho nanao fanalam-baraka ry zareo tamin'ny taona 2013. Izany no fotoana nahatsapako fa misy zavatra tsy mety ka nanomboka nanontany momba izany aho. nanao fikarohana aho ary tamin'izany no nahafantarako fa misy io zaridaina io azonao anaovana fihetsiketsehana ao Singapaoro. Tamin'ny fotoana nanatontosanay ny fihetsiketsehana voalohany izany.
Namorona lalàna isankarazany ihany koa ry zareo. Nogadraina aho tamin'ny herintaona. Taorian'ny fanagadrana ahy, nivoaka aho ary niresaka ny amin'ny fikarakarana tsy manaja ny mahaolona mihatra amin'ny mpiara-migadra amiko.
KT: Misy toe-javatra mampalahelo toy izany ihany koa ao Việt Nam mihatra amin'ny mpikatroka, mpanao gazety, bilaogera. Tena hafa ny fomba hampanginan'ny governemanta ny [fahalalaham-] pitenenana. Manana lalàna famaizana telo ampiasaina matetika hiampangana ny mpikatroka izahay, toy ny andininy faha-79 miresaka ny “fitarihana hetsika mikendry ny fanonganana ny governemanta.” Hafa noho izany ny raharaha any Singapaoro. Hita fa tao anatin'ny taona vitsivitsy izao dia lalàna maro no noforonina hampanginana ny fitenenana. Ahoana ny fomba vitsivitsy iezahanao mamaha izany olana izany? Ahoana ny hanohizanao ny fikarakarana na dia misy aza ireolalàna rehetra ireo?
HHH: Ny zavatra hafa azo lazaina dia, mihevitra aho fa manampahefana ao amin'ny governemantan'i Việt Nam maro no miofana ao Singapaoro amin'izao fotoana izao, ary mety hitondra zavatra maro ry zareo rehefa miverina any Việt Nam. Na dia lazaina ho “manana lalàna maro” aza izahay, dia natao hampidaraboka ny fitsikerana ny governemanta sy ny fitakiana mangarahara sy tamberin'andraikitra daholo izany. Mieritreritra aho fa amin'ny maha-mpiray faritra antsika dia mila mifanohana isika satria jerena ho mpitari-dalana i Singapaoro amin'izao fotoana izao, ary manaraka (maka) ireo lalàna ireo daholo ny firenen-kafa. Amin'ny fisian'ireo lalàna maro ireo ry zareo miezaka manindry ny olom-pirenena. Afa-miteny ry zareo, “voaheloky ny lalàna samihafa ny rehetra, noho izany tsy manohitra ry zareo.” Saingy ny zavamisydia ampiasaina izy io hamelezana ny vahoaka. Raha mikarakara ny vahoaka ny governemanta ary miaro ny zo fototra amin'ny fampialofana, fikarakarana fahasalamana, fanabeazana dia tsy hisy ny hitsikera azy ireo. tsy hisy akory aza ny hino anay.
Tamin'ny andro farany tamin'ny Fetiben'ny Fahafahana an'Aterineto, hita mbola miresaka ihany i Kathy Triệu sy i Hui Hui ka nanontaniana ny amin'ny herinandro niainany izy.
HHH: Mihevitra aho fa nahaliana ahy ny herinandro satria sambany no tonga eto i Singapaoro. Nahita aho fa tohina tokoa ny olona rehefa niezaka aho nizara momba izay mitranga ao Singapaoro amin'ireo lalàna maro izay navoaka hamelezana ny fahalalaham-pitenenana. Nianatra zavatra maro avy amin'ny vahoaka hafa amin'ny firenena hafa ihany koa aho. Ao amin'ny firenenay izahay manana propagandy milaza aminay fa izahay no tsara indrindra ary ratsy ny firenen-kafa. Saingy mahatsapa aho fa maro ny zavatra azo ifampianarana.
KT: Manana teny hafa hozaraina ve ianao?
HHH: Manantena aho fa tsy hanaraka ny maodely singapaoro ny firenena manerana izao tontolo izao. Manandràta teny ary manàna sendikàn'ny mpiasa mahaleotena sy sendikàn'ny mpianatra satria tsy manana izany izahay ao Singapaoro. Fantaro tsara izay rehetra miady ho anao satria ao Singapaoro, mandao mitady fialokalofana na manao sesitany ny tenany ny rehetra. Tena manirery ianareo rehefa miady irery ao Singapaoro.
Tafiditra ao anatin'ny fandaharana manokana momba ny Fetiben'ny Fahafahana an'Aterineto taona 2018 tontosain'ny Loa izy ity. Henoy ny antsafa izay manomboka eo amin'ny 6:11.